कसरी विनाइल रेकर्डहरू सफा गर्ने, यो गर्ने उत्तम तरिका ग्याजेट समाचार
यस्तो देखिन्छ कि हालसालै, हामी बसिरहेको धेरै प्राविधिक संसारमा, बढी भन्दा धेरै मानिसहरूले आफ्नो पुरानो फिर्ता पाइरहेका छन् विनाइल रेकर्डहरू उनीहरूलाई रमाईलो गर्न, या त पुराना यादों को लागी, ध्वनि गुण वा को लागी, उनीहरु ड्रर मा भण्डारण नगरेको र केहि उपयोग को लागी। यस बर्ष पहिले धेरै कलाकार र संगीत समूहहरू पनि छन् जसले आफ्ना नयाँ कामहरू विनाइल ढाँचामा रिलीज गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, बजारको निश्चित अंशले यसका लागि माग गरेको छ।
कुनै पनि अगाडि नजाईकन, यो लेख लेख्ने क्रममा म विनाइल रेकर्डको मज्जा लिइरहेको छु जुन १ 1984 XNUMX XNUMX को हो, र यद्यपि यसमा हालको अडियो सीडीको गुणस्तर छैन, जुन पुरानो यादवले हामीलाई दुई दशक पछाडि लिन्छ, जहाँ भेट्टाउने विनाइलको आवाजमा केहि अपूर्णताहरूले यसलाई सुन्दरता प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूको चरित्र हो। तर यसले हामीलाई आश्चर्यचकित पनि बनाउँछ हामी कसरी हाम्रो डिस्क सफा गर्न सक्छौं लागि उच्च गुणवत्ता प्राप्त गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई उत्तम सम्भावित अवस्थामा राख्नुहोस्। के त्यो प्रश्न उठ्छ? हामीसँग सामेल हुनुहोस् र तपाईंले यो गर्न उत्तम विधिहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ।
अवश्य पनि, दिमागमा राख्नुपर्ने पहिलो चीज कभर फोटो द्वारा निर्देशित हुनु हुँदैन। चलिरहेको पानी मुनि vinyl कहिल्यै न धुनुहोस्जबसम्म तपाईं आफ्नो मनपर्ने समूहबाट एक राम्रो राउन्ड पेपरवेट चाहनुहुन्न। विनाइल सफा गर्दा, हामीले डिस्कमा रहेको फोहोरको स्तरलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। २० वर्षको लागि भण्डारण कोठामा भण्डार गरिएको विनाइल हामीले प्रायः प्रयोग गर्ने रेकर्डको रूपमा मिल्दैन।
1 कार्बन फाइबर ब्रश
2 विनाइल रेकर्ड सफा गर्नको लागि भेलभर्ट ब्रश
3 हामीसँग घरमा भएका उत्पादनहरूसँग विनाइल सफाई गर्दै
सतहको फोहोर र धुलो सफा गर्ने सरल विधिaहो कार्बन फाइबर ब्रश। त्यो नामले तपाईंलाई अलार्म गर्दैन, राम्रोसँग यसको मूल्य १० र २० युरो बीचमा छ, अमेजनमा कुनै पनि अगाडि नजाँदै तपाईले हामा ब्रान्ड मध्ये कुनै एकको बारेमा १० यूरो भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यसको प्रयोग सजिलो छ डिस्क प्लेब्याक पहिले र पछाडि यसलाई पास गर्नुहोस्, र यो मात्र होशियार हुनु आवश्यक छ धेरै दबाउ नलगाउनुहोस् ताकि ब्रस्टल्स भाँडोमा छिर्दैन र तिनीहरूलाई नोक्सान गर्न सक्छ.
यसको उद्देश्यहरू मध्येको त्यो पनि हो विनाइल सतहमा स्थिर स्टेटिक बिजुली हटाउनुहोस्, त्यसैले यसले अधिक फोहोर आकर्षित गर्नबाट रोक्छ। यो सरल उपकरणको साथ हामी प्राप्त गर्नेछौं हाम्रो रेकर्डको संरक्षणको स्थिति सुधार र सबै भन्दा माथि ध्वनि गुणस्तर सुधार गर्नुहोस्.
विनाइल रेकर्ड सफा गर्नको लागि भेलभर्ट ब्रश
हामी भन्न सक्दछौं कि यो समाधान अघिल्लो सेक्सनमा एकको पहिलो कजिन भाई हो। साधारणतया उही सिद्धान्त मा आधारित छ, मात्र भिन्नता संग ब्रश सामग्री, que यो कार्बन फाइबरको सट्टामा मखमल हो। यो नरम सामग्री हो, त्यसैले हामीसँग छ डिस्क क्षतिको कम जोखिम। मखमल ब्रश को नकारात्मक पक्ष?
मुख्य रूपमा त्यो अधिक फोहोर आकर्षित गर्दछ, त्यसैले समय-समयमा यसलाई हामीलाई रक्सीले सफा गर्न आवश्यक पर्दछउदाहरण को लागी, र यसलाई सुक्नुहोस्. १० भन्दा कम युरोको लागि हामीसँग यो किट छ जुन, मखमल ब्रश समावेश गर्नुको साथै, हाम्रो टर्नटेबलको सुई सफा गर्नको लागि माइक्रोफाइबर कपडा र एउटा सानो ब्रश समावेश गर्दछ।
हामीसँग घरमा भएका उत्पादनहरूसँग विनाइल सफाई गर्दै
तर शान्त। यदि तपाईंसँग दुई ब्रशहरू छैनन् जुन हामीले तपाईंलाई पहिले देखाइसकेका छौं, वा तपाईं तिनीहरूलाई खरीद गर्न चाहनुहुन्न भने चिन्ता नलिनुहोस्। हामीसँग घरमा भएका उत्पादनहरूसँग सफा गर्न विकल्पहरू छन्, वा त्यो तिनीहरूलाई नभएको अवस्थामा, हामी सजीलो र सस्तोमा किन्न सक्छौं। होईन, हामी रेकर्ड ट्याप मुनि राख्ने कुरा गरीरहेका छैनौं, तर को बारे मा साधारण आईटमहरू जस्तै माइक्रोफाइबर कपडा, धुलो कपडा वा गिलास सफा वाइपहरू। के तपाईंलाई सम्झना छ जब हामीले वर्णन गरेका थियौं कसरी तपाइँको मोबाइल स्क्रिन सफा गर्ने? ठीक छ, धेरै तत्वहरू विनाइल रेकर्ड सफा गर्न सामान्य छन्।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ शौचालय कागज वा टिश्यु जस्ता वस्तुहरू प्रयोग गर्नबाट बच्नुहोस्, तिनीहरूले विनाशलाई बिगार्न सक्ने अवशेषहरू छोड्ने रूपमा। हामीले पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ एक microfiber कपडा प्रयोग गर्दा यो बनाउनुहोस् एकदम नयाँ, कि हामीले यसलाई अरू कुनै पनि चीज सफा गर्न कहिल्यै प्रयोग गरेको छैन, र त्यो यसलाई धुनुहोस् वा प्रयोगको एक जोडी पछि अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुहोस्, र फेरि नयाँ प्रयोग गर्नुहोस्। यो संग हामी डिस्क खरोंच गर्नबाट जोगिनेछौं सम्भावित कणहरूको कारणले गर्दा अन्य तत्वहरू सफा गर्ने परिणामको रूपमा रहेको छ।
तपाईंले देख्नु भएको छ, विनाइल रेकर्ड सफा गर्नु एकदम साधारण कार्य हो र यो महँगो वा कठिनाई पत्ता लगाउन विशिष्ट तत्वहरू आवश्यक पर्दैन, र त्यो पनि यो सफा गर्ने तत्वहरूसँग गर्न सकिन्छ जुन हामीसँग घरमा हुन्छन्यद्यपि माथि दिइएका एक ब्रशमा सानो लगानी छ यसले हामीलाई हाम्रो vinyls राम्रो अवस्थामा राख्न र लामो समयको लागि त्यो ध्वनि गुण प्राप्त गर्न जारी राख्न अनुमति दिनेछ।.
हामी सिफारिस गर्छौं मदिरा प्रयोग नगर्नुहोस्, किनकि यसले एसिड र सॉल्भन्ट्सको श्रृंखला समावेश गर्दछ जुन सामग्रीलाई हानिकारक हो र यसले हाम्रो बहुमूल्य डिस्कहरूलाई बेकार प्रदान गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » विनाइल रेकर्डहरू कसरी सफा गर्ने
थर्मोमिक्स टीएम cooking, बुद्धिमान मेसिनको साथ खाना पकाउनको आनन्द जुन वाइफाइ जडान थप गर्दछ